MACLUUMAADKA TARANKA EEYGA SARPLANINAC IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyga Sarplaninac iyo Sawiro
'Tani waa Hera, oo ah seddex jir Sarpie ah oo aan kula kulannay mid ka mid ah kormeerayaasha cagta ee woqooyiga Kosovo. Milkiilaheeda ayaa dhawaan ka fogeeyay laxdiisa, marka eeyga ayaa aad u danaynayay inuu ilaaliyo hantida. Waxay umuuqatay mid aan naga fogeyn maadaama aan kaliya soconayno, laakiin waad u sheegi kartaa hadii aan aad isugu soo dhowaan lahayn, waxay bilaabi laheyd inay xoogaa xadgudub ah muujiso.
Adhijirka reer Makedoniya
Eyga Shepherd-Makedonia-Yugoslavia - Sharplaninec
Shepherd Dog ee Serbia iyo Montenegro
Yugoslav Eyga Buurta
Dharka Sarplaninac waa dhererkiisu yahay 4 inji (10 cm). Timaha waa cufan yihiin oo si siman loo qaybiyay. Midabbada waxaa ka mid ah: cawl, caddaan, tan iyo madow. Midabbada waxay noqon karaan kuwo adag ama isku dhafan. Sarplaninac waa mid ka mid ah ilaalada yar ee adhiga leh ee leh midabbo adag oo aan ahayn caddaan. Jidhku waa dhexdhexaad cabbir iyo laf. Baalashka hoosta iyo lugaha iyo dabada duurka leh, si kastaba ha noqotee, waxay bixisaa muuqaalka eey badan oo jilicsan. Caarada sanku waa mid aad u weyn, laakiin aan soo bixin. Dabada ayaa waxyar ka qalooca meertada. Gacanta ayaa si fiican ufiican, muruqsan oo ku dhow dhow. Indhuhu waa mugdi iyo qaab moodhlan. Muujinta dareenka leh, takoorka ayaa ah dabeecad.
Sar waa eey adhi-ilaaliye ah oo u baahan in la shaqeeyo. Eygan ilaaliyaha ah ee idaha ilaaliya ayaa ah mid aan jeclayn aadanaha. Waxay ka jeceshahay adhiga si xamaasad leh u ilaalinaysa. Waxay leedahay astaamo ilaalin dabiici ah iyo feker madaxbannaan oo caadi ah kooxda ilaalada adhiga. Caadi ahaan is deji, laakiin marka xaaladdu timaaddo, waa wax daran oo ku saabsan dadaalkeeda ay ku ilaalinayso adhiga. Waxay u qaadataa shaqadeeda si dhab ah. Markay ku jirto waajibaadka ilaalinta idaha waxay baari doontaa wax kasta oo indhaheeda soo jiita, mana ka waabanayso ka hor-tagga kuwa ka soo horjeedka ka weyn nafteeda. Tani maahan dabin-bilaa-maskaxeed ah Sarplaninac waa eey aad u caqli badan oo doorta asxaabta si taxaddar leh oo aan cidna kalsooni buuxda ku qabin. Wuxuu aad ugu adeecsan yahay xeerarkiisa asalka ah ee akhlaaqda saxda ah halkii uu ka aqbali lahaa amarrada hal sayid, oo isagu isagu aad ugu daacad yahay. Eeyahaani waxay aad ugu heellan yihiin adhigooda. Hal bil oo Sar ah oo ku nool Mareykanka barnaamij ilaalin adhi ah ayaa bilaabay inuu la shaqeeyo adhiga bakhaarka. Magaciisu wuxuu ahaa Bruno lagumana sasabi karo maqaaxihiisa, xitaa inuu ciyaaro. Xilliga guga, si kastaba ha noqotee, idaha qaar ayaa la iibiyay, qaar kalena waa la iibsaday oo adhiga ayaa loo saaray daaq. Eeygu wuxuu ahaa shaqaalihii ugu habboonaa, isagoo si farxad leh ula qabsanaaya idaha cusub iyo guryaha cusub. Idaha iyo riyaha ridayaasha ayaa ogaanaya faa'iidooyinka lahaanshaha Sar marka dhibaatooyinka ugu badan ee ugaarsigooda la waayo. Eeyadan ayaa u dulqaadan doona xubnaha qoyska oo ay ku jiraan carruurta haddii lala koriyo, laakiin waxay ka fogaan doonaan shisheeyaha. Sar wuxuu ilaalin doonaa dhammaan dhulkiisa iyo noolaha ku dhex jira. Tani waa nooc aan loo baahnayn in si fudud loo qaato. Waxay noqon kartaa khibrad wax ku ool ah haddii lagu meeleeyo xaaladda saxda ah. Waxay u baahan yihiin shaqo, waqti iyo, sida wax kasta oo beeraha ka jira, maamul habboon. Haddii aad qorsheyneyso inaad sii haysato noocyadan wehel ahaan oo aadan u eey ka shaqeynin eeyga loo soo saaray inuu noqdo, hubi inaad 100% tahay qof adag, kalsooni leh hoggaamiye xirmo joogto ah . Milkiilayaasha Meek waxay isku arki doonaan inaysan awood u lahayn inay xakameeyaan eeygan. Tani ma aha eey bilowga ah.
Dhererka: 22 - 24 inji (56 - 61 cm)
Miisaanka: 55 - 88 rodol (25 - 39 kg)
Sarplaninac laguma talinayo nolosha guriga. Waxay leedahay jaakad cimilada oo dhan ah waxayna ku qanacsan tahay ku noolaanshaha iyo ku seexashada banaanka. Dabeecaddiisu waxay dalbaneysaa nacasnimo, nolol dibedda ah. Wuxuu ku noolaan doonaa ugu fiican beer isagoo leh adhi si uu u ilaaliyo.
Noocani wuxuu u baahan yahay jimicsi badan. Beerta bilaashka ah waxay daryeeleysaa baahideeda jimicsi, si kastaba ha noqotee, haddii aysan si firfircoon uga shaqeynin beer, waxay u baahan tahay in la qaato maalin kasta socod ama orod.
eyda ey ku bilaabmaan y
Qiyaastii 11-13 sano
Koodhku wuxuu ka faa'iideysan doonaa burushyada mararka qaarkood.
Magaca Sarplaninac waxaa loogu dhawaaqaa 'shar-pla-nee-natz.' Wuxuu ka soo jeedaa qaybta koonfur-galbeed ee Srbija (koonfurta Kosovo) iyo qaybta waqooyi-galbeed ee Macedonia (Shar Planina, Bistra, Korab, Stogavo, Mavrovo, Jablanica iyo Pelister, iwm). Aaggan juquraafi ahaan ayaa mar loo yaqaanay Illyria, oo ah magaca asalka ah ee loo bixiyo jiilaalka. Gobolka ayaa hadda loogu yeeraa Macedonia, laakiin eeyaha ayaa inta badan ka shaqeyn jiray buuraha Shar Planina waxaana loogu magac daray safafka. 1939 eeyaha ayaa ka diiwaangashan FCI iyaga oo ku magac dheer eey adhijir ah oo la yiraahdo Illyrian. Sannadkii 1954 FCI waxay aqbashay magaca laga beddelay eeyga adhijirrada ah ee Illyrian loona bixiyo magaca Yugoslav eey adhi-Sharplaninec ah. Burburkii Yugoslavia iyo Midowgii Soofiyeeti ka dib, Macedonia waxay codsatay in magaca eeyga la beddelo si loo aqoonsado labada waddan, Macedonia iyo dhinaca Serbia. Waxaa la isku raacay in loo badalo magaca eeyga loona bixiyo Macedonia-Yugoslav Shepherd Dog - Sharplaninec. Sarplaninac wuxuu leeyahay sharaf inuu noqdo mid ka mid ah laba eey oo kaliya oo ay aqoonsato Naadiga Yugoslavia, oo ah naadiga rasmiga ah ee dalkiisa hooyo. Waxaa loo maleynayaa inuu ka weynaan doono Adhijirka Istariya (in kasta oo uusan u da 'weyneyn sida Giriigga Shepherd Dog ama Turkiga Akbash), ilaaliyaha ilaaliyaha ah ayaa ku jira tiro waara oo ka jirta Albania iyo Macedonia. Markii ugu horreysay waxaa loo aqoonsaday inay tahay nooc gaar ah 1930. In kasta oo qalalaasaha ka jira Bosnia ay yareeyeen tirada dadkan ku nool dhulkeedii hore, tan iyo markii 1975 dhoofinta guuleysatay loo qaaday Mareykanka iyo Kanada si loo xakameeyo cuncunka, waana halka ay mustaqbalkeeda ku tiirsan tahay. Waxay hadda heleysaa aqoonsi inay tahay shaqo-badan, diyaarna u ah inay ilaaliso waddamadaas. Tiro badan oo ka jirta waddankeeda, Sarplaninac ayaa weli ka mid ah adhiga weyn. Waa wax badan oo mararka qaarkood lo 'ama waxay u adeegtaa sidii waardiye. Xaqiiqdii, khad milatari oo Sars ah ayaa laga sameeyay xeryaha Marshall Josip Tito.
Alma the Sarplaninac oo 2 jir ah kana yimid Hungary— 'Alma waa eey dumar ah oo dhallinyar oo caadi ahaan deggan. Waxay u dhowdahay inay yeelato eeyo goor dhow. '
'Sasha waa Sharplaninec sidoo kale loo yaqaan' Adhijir reer Makedoniya ah oo halkan lagu muujiyey isagoo jira 2 sano. Waxay leedahay shakhsiyad weyn waana ilaaliye aad ufiican milkiilaheeda. Iyadu waa nooc weyn oo leh jaakad dhaadheer. Sasha waa mid caqli badan isla markaana aad u wanaagsan in la tababaro. Dhibaatada kaliya ee haysataa waa iyada oo ciyeysa. Waan ka shaqeyneynaa taas iyaduna way baraneysaa. '
Hera Sarpie da'da 3 sano
'Kani waa Bear, oo ah lix jir Sarpie ah iyo milkiilahiisa meel u dhow magaalada Novo Brdo ee koonfur-bari Kosovo. Bear wuxuu nagu bilaabay inuu nagu ciroodo markii aan isku soo dhawaannay, laakiin milkiilihi wuu soo baxay wuuna igu qanciyay inaan u sacabo Weli wuxuu umuuqday mid sifiican uga baqaya soo booqdayaasha cusub, waana ogahay xaqiiqda hadii milkiiluhu uusan meesha joogi lahayn, sidaasoo kale ugama dhawaaneen. Markii aan xusay waxaan akhriyay inay yihiin eeyo adhi badan, milkiiluhu wuxuu bilaabay dhoola cadeyn wuxuuna ii sheegay in Bear uu dilay labo yey si hubaal ah inuu ogyahay. Waxba kama arki kartid sawirka, laakiin badh dhagtiisa bidix ayaa ka maqan-malaha mid ka mid ah dagaalladan. '
'Qaado Sarpie da'da 6 sano jir ah-hal shay oo aanan waligey awoodin inaan ka gudbo markaan arko eeyahaani waa koofiyadooda qurxoon, gaar ahaan kuwa leh dharka madow ee madow. Waxaan hayaa dhowr sawir oo kale oo eeyo ah oo aan hubo inay ku qasan yihiin Sarplaninacs waxaanan qiyaasayaa inay yihiin Adhijirro Jarmal ah (maadaama ay halkan si caadi ah ugu badan yihiin), waxayna leeyihiin isku midabeyn, laakiin meydadka lama dhisin waa isku mid, oo waxaa jira kala duwanaansho qeexan oo dabeecad leh - iyada oo noocyada isku dhafan ay aad u wada deggan yihiin. '
Milkiilaha Bear wuxuu yiri wuxuu u egyahay inuu yahay mid dagaal badan oo eyga ah, wuxuuna ku sababeeyay inay tahay sababta ugu weyn ee isaga loo xirayo marka adhiga aysan u bixin daaq.
'Sawirkii ugu dambeeyay ee aan ku lifaaqay xoogaa wuu khilaafsan yahay taas, maadaama ay tahay' Sarpie 'oo la ciyaaraya' eey kale oo ku sugan waqooyiga Kosovo oo u dhow xadka Serbia. Eyga yar ayaa ahaa mid aad u dhib badan, laakiin Sarpie wuxuu umuuqday mid ku raaxeysanaya la ciyaarida isaga.
Kani waa Bistra ilaaliyaha tuuladayda Lazaropole-R. Makedoniya Iyadu ma leh hal qof, laakiin waxaa iska leh dadka tuuladeenna kulligeenna waan daryeelaynaa iyada iyo carruurteeda. Cayaartoydeeda ayaa koray hadda. Xilliga jiilaalka shaqaalaha rugta saadaasha hawada ayaa daryeela iyaga. Dhammaantood waa kuwo saaxiibtinimo nala wadaaga, laakiin ma ahan kuwo ciyaar badan. Waxaan u maleynayaa inay tahay dareenkooda difaaca dabiiciga ah ee feejignaanta. Ha qaadan cunnadan haddii aadan siin karin meel ay si xor ah ugu socdaan.
Bistra oo ah Sarplaninac oo ilaalinaysa tuulada
Bistra Sarplaninac oo ay weheliso ardaydeeda
Eeg tusaalooyin dheeraad ah oo ku saabsan Sarplaninac
Sawirada Sarplaninac 1
Sawirada Sarplaninac 2
silig timo iskujir schnauzer isku qasan
cocker Ingiriisi spaniel midabada beerka & tan
adhijir Australia iyo isku dhafka sheltie
sheybaarka iyo isku darka cidhib-tirka cas
waa eygaygu qayb coyote
nus mini pincher badh chihuahua